आत्मर्निभरताको बाटोमा भारत « रिपोर्टर्स नेपाल
प्रकाशित मिति : 2022 June 21, 4:16 pm
विपिन देव: राष्ट्रियतालाई सुदृढ बनाउन मुलुक आत्मर्निभर हुनु अति आवश्यक हुन्छ । आवेग, समवेग र उद्वेगबाट राष्ट्रियता बलियो हु‘दैन । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा राष्ट्रियताको संकल्प नेताहरूको आभिव्यक्ति र उदघोषमा मात्रै सुन्न पाइन्छ । रसिया र युक्रेनको युद्ध लगतै विश्व उर्जा संकट र खाद्य संकटसंग जुधिरहेको वेला हरेक मुलुकले आप्mनो आन्तिरक उत्पादन र वितरण प्रणाली प्रति सजग र गम्भीर भएका छन् । विदेशी सहयोग र भ्रष्ट नेतृत्वको कारणले विभिन्न मुलुकहरू आर्थिक दिवालीयापनको संघारमा छन् । श्रीलङ्का र पाकिस्तानको अवस्थाको बारेमा विभिन्न छापाखानाहरूले सम्पादकीय नै प्रकाशित गरेका छन् । वर्तमान परिवेशमा नेपालले पनि यी मुलुकहरूसँग पाठ सिक्दै भविष्यको मार्ग चित्र तयार गर्नु पर्दछ ।
प्रजातान्त्रिक वाटोवाट नै लोककल्याणकारी राज्यको उद्देशय प्राप्त गर्न सकिन्छ भने तथ्य भारतको उदाहरणले पनि पुष्टि गर्दछ । तानाशाही शासन व्यवस्थावाट प्राप्त लाभांश दिर्घकालीन हु‘दैन । अमेरिकाले गरेको २०० वर्षको विकास यात्रा सोभियत रुसले ७० वर्षमा नै पुरा गरेका थिए । तर सोभियत रुसको उपलव्धीले स्थायीत्व प्राप्त गर्न सकेन । वर्तमान परिवेशमा भारतको विकासको यात्रा पनि नेपालको लागि फलदायी हुनु सक्छ । नीतिगत प्रयोग र संसाधन परिचालन नेपालले आप्mनै क्षमतावाट गर्न सक्दछ । अमेरिकाको भियतनाम नीतिको कटु आलोचक भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री लाल बहादुर शास्त्री थिए । अमेरिकी नीतिलाई विरोध गर्दा अमेरिकाले गहु निर्यात नगर्ने भारतलाई धम्की दिए । शास्त्रीजीले चुनौती र संकटलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गर्दै “जय जवान र जय किशान” को नारा दिदै भारतीय राजनीति र अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भरताको विउ छरे । ९० को दशकमा भारत फेरि आर्थिक दिवालीयापनको संघारमा पुग्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नरसिंह राव आर्थिक अस्थिरता संकटलाई चूनौतीको रुपमा लिदै आर्थिक खुलापन अर्थात् उदार अर्थतन्त्रको ढोका खोल्दै ३.५५ वाट ८.५ प्रतिशतको विकास दर हासिल गर्दै प्रजातान्त्रिक पद्धतिवाट संरचनात्मक परिर्वतन ल्याउन सफल भए । विगत आठ वर्षदेखि भारत प्रजातान्त्रिक पद्धतिवाट आर्थिक क्रान्ति गरिरहेको छ । हिंसा र दमनवाट भएको परिर्वतनको पराकम्पन महसुस गर्न सकिन्छ । तर प्रजातान्त्रिक तरिकावाट भएको परिर्वतन सुस्त देखिएता पनि स्थायित्व र दीर्घकालीन हुने गर्दछ ।
भारतले जनधन योजना लागु गरेको छ । उक्त योजनावाट ३०० मिलियन नागरिकहरू वैंकिक सुविधा प्राप्त गरेका छन् । ३० करोड भन्नाले ८०५ अमेरिकी जनसंख्या बुझिन्छ । साधारण जनता उक्त योजना अन्र्तगत राज्यद्वारा प्रदत लाभ आप्mनो वैंकको खातावाट प्राप्त गर्न सक्दछ । अर्थात् यो पद्धतिवाट विचौलीयाको बजार समेत अन्त्य भएको छ । साथ साथै “हर घर जल” योजनाको माध्यमवाट ४५ करोड नागरिकको घरमा खानेपानी धारा जडान भएको छ । ४५ करोड भन्नाले पुरै यूरोप र अमेरिकाको जनसंख्या नै बुझिन्छ । साथ साथै ८० करोड जनतालाई एल.पी.जी. ग्यास सुविधा राज्यले वितरण गरेको छ । ८ करोड भन्नाले जर्मनीको जनसंख्याको आकार बुझिन्छ । विगतका दिनमा प्रधानमन्त्री आवास योजना अन्र्तगत १ करोड ५० लाख जनतालाई आवास सुविधा उपलब्ध गराएका छन् । १ करोड ५० लाख जनता भन्नाले जापानको पुरै जनसंख्या बुभ्mन सकिन्छ । कोरनाको कहरवाट पूरै समाज आक्रान्त रहेको अवस्थामा भारत सरकारले प्रत्येक दिन ८१ करोड जनतालाई भोजना उपलब्ध गराएका थिए ।
८१ करोड भन्नाले पूरै युरोप र अमेरिकाको आकार बराबर हो । भारतले गार्मिण क्षेत्रलाई मध्य नजर गर्दै व्यापक रुपमा विद्युत जडान गरिरहेको छ । तदनुरुप सौभाग्य भारत योजना अन्र्तगत १३० मिलियन जनतालाई विद्युत सेवा प्रदान गरेका छन् । १३ करोड भन्नाले झण्डै रसियाको जनधनत्व बुझिन्छ । भारतको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम पनि वडो प्रभावकारी देखिएको छ । आयुष्मान भारत जस्ता कार्यक्रमको माध्यमवाट १७ करोड जनतालाई यस कार्यक्रम भित्र समाहित गरेका छन् । १७ करोड भन्नाले मेक्सिकोको जनसंख्याको आकार बुझिन्छ ।
लोककल्याणकारी नीति अनुरुप समाजमा स्थापित संस्थानहरूमा अधिक भन्दा अधिक जनताको पह‘ुच बढाउन भारत सरकारले महत्वाकांक्षी योजना समेत अगाडी बढाइरहेको छ । अर्थात् आए.ए. आए.आए.टी, एम.स. जस्ता व्रााण्डहरूको संख्यामा पनि व्यापक वृद्धि भइरहेको छ । उक्त कार्यक्रमवाट जनताले स्तरीय सेवा प्राप्त गर्न सकिने वातावरण निर्माण हुन सक्छ । साथ साथै भारतले पूर्वाधार निर्माणमा व्यापक ध्यान दिइरहेको अवस्था छ । भारतका पूर्वाधार विकास मन्त्रीले सन् २०२४ सम्म भारतका राजमार्गहरूको स्तर अमेरिकाको राजमार्गको स्तरमा हुने कुरा सार्वजनिक रुपले घोषणा नै गरेका छन् । प्रधानमन्त्री सडक योजना अन्र्तगत भारतका ८० प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र जोडिएको कुरा उनको जिकिर रहेको छ ।
सडक विस्तार र व्यवस्थापनका लागि भारत सरकारले १ लाख ८० हजार करोड धनराशी बजेट विनियोजन गरेको छ । पेट्रोल र डिजेलको विकल्पमा “इथोनल”को प्रयोग गहु‘, ऊखु र खाद्य वस्तुवाट हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्य नजर गर्दै भारतले आप्mनो अनुसंधानलाई तिव्रता दिएको छ । सौर्य उर्जा, विद्युत उपकरण र इथोनेलको मद्दतले पेट्रोल र डिजेलको आयातलाई न्यूनिकरण गर्न भारत सरकारले ठुलो अनुसन्धानको अनुष्ठान गरेको छ । आउने दिनमा संसारको सबभन्दा ठुलो “अटोमोवाइल उत्पादक” बन्ने सम्भावनालाई मध्य नजर गर्दै भारतले संसारको सबै उच्च स्तरीय अटोमोवाइल कम्पनीहरूलाई भारतमा लगानी गर्न भारत सरकारले वातावरण निर्माण गरिरहेको छ ।
यी अध्ययन र तथ्याङ्कको आलोकमा हामीले हाम्रो अवस्था माथि गम्भीर हुनु पर्ने अवस्था देखिन्छ । नेपालको हरेक गाउ‘मा उत्पादन क्षमता छ । जल, जमीन र जङ्गले परिपूर्ण भएको देशमा संकल्पको कमी छ । विचौलीयाको चलखेलवाट परिचालित भ्रष्ट नेतृत्व पंक्तिलाई पाखा लगाउनु पर्ने टडकारो आवश्यक्ता छ । तदन्रुप विगतका दिनहरू देश दोहन गरेका नेताहरूको अकुत सम्पतिलाई छानविन गर्दै त्यसलाई नै राष्ट्रियकरण गर्दै राष्ट्रिय पू‘जीमा परिर्वतन गर्नु पर्दछ । आत्मनिर्भरता र आर्थिक विकासलाई मुलमन्त्र बनाउ‘दै सबै किसिमका आयतीता वादहरूको प्रतिवाद गर्नु पर्दछ र नेपालवादको धालनी गर्नु पर्दछ । विकासमैत्री वातावरण बनाउन गाउ‘को निर्भरता शहरमा, शहरको र्निभरता काठमाडौंमा र काठमाडौंको निर्भरता विदेशी .ऋणमा हटाउनै पर्दछ । नेपालको विकासको लागि आत्मनिर्भरता नै विकल्प हो ।
काठमाडौँ,७ असार । नेकपा एमाले का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले छिमेकी मुलुकसँग भरपर्दो र विश्वसनीय
काठमाडौँ,७ असार । सरकारले आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्नुपरेको प्रष्टीकरण दिएको